आलुकाे महिमा : लघुकथा - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २० पुष २०७७, सोमबार १५:२४ मा प्रकाशित
किसानले आफ्नाे खेतभरि तरकारी उमारेका थिए । खेतमा आलु , फर्सी ,भ्यान्टा, तितेकरेला, काउली, बन्दाकोपी सँगसँगै बड्दै हुर्किदै थिए । याे बर्ष तरकारीबाट राम्राे आय आर्जन गर्छु भनि किसानले मिहिनेत गरिरहेकाे थियाे।
आलुमा सेता फूल फुल्दै थिए। फर्सी पनि लह-लह गर्दै मास्तिर थाङ्ग्राेमा बेरिदै थियाे । फर्सीकाे देखासिकी गरेर तितेकरेला पनि बामे सर्दै थाङ्ग्राेतिर बड्दै थियाे।
अर्काकाे प्रशंसा गरेर आफ्नाे स्वार्थ पूरा गर्न खपिस थियाे बन्दाकोपी । एकदिन बन्दाकोपीले फर्सी र तितेकरेलाकाे खुब बखान गर्याे।
फर्सी र तितेकरेला खुब मिलेजस्ताे देखिन्थे । बन्दाकोपीले प्रशंसा गरिदिँदा उनीहरू मख्ख पर्थे। अर्काकाे प्रशंसा गरेर आफ्नाे स्वार्थ पूरा गर्न खपिस थियाे बन्दाकोपी । एकदिन बन्दाकोपीले फर्सी र तितेकरेलाकाे खुब बखान गर्याे। नजिकबाट सुनिरहेका काउली र भ्यान्टा छक्क परे ।
बन्दाकोपी भन्दै थियाे। “फर्सी र तितेकरली ! म तिमीहरूकाे शुभचिन्तक हुँ। तपाईंहरूकाे जति हाइट यहाँ अरू कस्काे छ ? भगवानलाई मन पर्ने पहेलाे रंगमा फुल्नुहुन्छ । एउटै रंगमा फल्नु हुन्छ लाग्छ दिदी बहिनी जस्तै। अलिकति माेटी र डल्ली फर्सी अलिकति अग्ली र पातली तितेकरेली ।” फर्सी र तितेकरलीकाे प्रशंसा गर्दा गर्दै बन्दाकोपीले आलुतिर हेरेर आलुलाई खसाल्दै भन्याे। ” आलु ! तिमी त भुइँकाे भुइँमै कुहिन्छाै। फूलपनि तिम्राे राम्राे हाेइन। तिमीलाई असफलताको प्रतिक मान्छन् मान्छेहरू र गाली गर्छन् आलु भनेर।”
बन्दाकोपीले आलुतिर हेरेर आलुलाई खसाल्दै भन्याे। ” आलु! तिमी त भुइँकाे भुइँमै कुहिन्छाै। फूलपनि तिम्राे राम्राे हाेइन। तिमीलाई असफलताको प्रतिक मान्छन् मान्छेहरू र गाली गर्छन् आलु भनेर।”
आफुलाई हेपेर बाेलेकाेमा आलुले भन्याे। “हेर बन्दाकाेपी ! समयलाई पर्खन सिक। कस्काे मूल्य कति हुन्छ। समय आएपछि थाहा पाउने छाै ।” अघिदेखि कुरा सुन्दै आएका काउली र भ्यान्टा दाेधारमा परे कस्काे कुरा सहि हाे भनेर ।
आलु सबै भन्दा बढी बिक्री भयाे । अरू तरकारी मुश्किलले अलिअलि बिके ।
एकदिन किसानले सबै तरकारीहरू बिक्री गर्न बजारमा लगे । आलु सबै भन्दा बढी बिक्री भयाे । अरू तरकारी मुश्किलले अलिअलि बिके । किसानले ग्राहकलाई नबिकेकाे फर्सी कम मूल्यमै भएपनि किनिदिने आग्रह गरे तर फर्सी भित्र भित्रै कुहि सकेकाेले बिक्री हुन सकेन ।
आलुकाे माग झन् झन् बढ्न थाल्याे । लामाे समयसम्म राख्न सकिने । सबै तरकारीमा मिसाउन मिल्ने । खाजाकाे रूपमा विभिन्न परिकार बनाएर खान मिल्ने। बच्चा देखि बुढासम्मलाई मन पर्ने ।
खाल्डाेमा कुहिदै गरेकाे बन्दाकोपीलाई हेर्दै आलुले भन्याे। “देख्याै त बन्दाकोपी ! समयकाे खेल ।
किसानले याे बर्ष आलु बेचेर राम्राे कमाई गरे। बिक्री नभएका कुहिएका फर्सी काउली बन्दाकोपी लगेर खाल्डोमा हालीदिए । खाल्डाेमा कुहिदै गरेकाे बन्दाकोपीलाई हेर्दै आलुले भन्याे। “देख्याै त बन्दाकोपी ! समयकाे खेल । आज तिमी कुहिदै छाै । त्यसैले कसैलाई उचाल्ने पछार्ने काम गर्नु हुँदैन ।